काँग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं १० को सभापतिमा महर्जन विजयी « Jagaran News
Published On : 25 November, 2021 2:11 pm
काठमाडौँ , ९ मंसिर । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं १० को सभापतिमा पुकार महर्जन निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको १४ औँ महाधिवेशअन्तर्गत सम्पन्न क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रदेश सांसदसमेत रहनुभएका उनले ३२० मत प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, सचिवमा हरिबहादुर महर्जन २९६, राजु खत्री २५३, सहसचिवमा मिलन विष्ट २२९ र शिशिर महर्जनले २२६ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए ।
महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमा लक्ष्मीदेवी दाहाल रावल, अजितादेवी शर्मा, यशोधा गौतम र मनमैया गिरी, आदिवासी जनजाती महाधिवेशन प्रतिनिधि बद्रीलाल महर्जन, विष्णुमान मानन्धर र चन्द्रबहादुर गोपाली, आदिवासी जनजाति महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सिर्जना श्रेष्ठ (सिंह) र यमुनादेवी श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्।
यस्तै, खस आर्य तर्फ सीता केसी (खड्का) र तारा बुढाथोकी, खस आर्य महाधिवेशन प्रतिनिधि पुरुषतर्फ गणेशबहादुर सुवेदी र राजेन्द्र खत्री र अल्पसङ्ख्यकबाट सुदन महर्जन विजयी भएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ, मंसिर ८ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धि फिर्त लिन माग
कांग्रेस अधिवेशन : २६ जिल्लाको मत परिणाम आउँदा कहाँ कुन पक्ष विजयी ?
काठमाडौं, मंसिर ८ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा धमाधम अधिवेशनहरु भइरहेका
जसपाका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप यादवलाई किन कारवाही गर्ने निर्णयमा पुगियो ?
काठमाडौँ , ९ मंसिर । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप यादवलाई कारवाही
आज २ बजे फुलकोर्ट बस्ने, १५ गतेदेखि गोलाप्रथा सुरु गर्ने तयारी हुदैँ
काठमाडौँ , ९ मंसिर । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि फुलकोर्ट बैठक